Bokin' i Jodita - Wikipedia
Bokin' i Jodita
Ny Bokin' i Jodita dia boky ao amin' ny Baiboly jody (na jiosy) amin' ny teny grika atao hoe Septanta na Septoaginta izay mitantara ny nampitsaharan' i Jodita, vehivavy mpitondratena jody (na jiosy), ny horohoro nahazo ny Jody (Jiosy) noho ny hanafihan' ny Asiriana azy ireo, tamin' ny nanapahany ny lohan' ilay jeneraly asiriana atao hoe Hôlôferna. Izany fanapahan-doha izany no nampitsahatra ny tahotra sady namelona indray ny finoan' ny Jody ny hery mpanafaka ao amin' Andriamanitra.
Manapaka ny lohan' i Hôlôferna i Jodita, nataon' i Trophime Bigot, taona 1579-1650
Ny Bokin' i Jodita dia tsy hita ao amin' ny Tanakh (Baibolin' ny jiosy amin' ny teny hebreo). Ataon' ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa ho boky deoterôkanônika izy nefa ny Prôtestanta dia manao azy ho boky apôkrifa.
2 Fizaràn' ny boky
2.1 Ny fanafihan' ny Asiriana sy ny nanaovana fahirano an' i Betolia
2.1.1 Ny fanafihan' ny Asiriana ireo firenena any andrefana (1.1–3.9)
2.1.2 Ny horohoro nahazo an' i Israely (4.1- 7.32)
2.2 Ny nanavotan' i Jodita ny fireneny
2.2.1 I Jodita (8.1 - 9.14)
2.2.2 I Jodita sy i Hôlôferna (10.1–13.20)
2.2.3 Ny fandresen' ny Israelita ny Asiriana (14.1–16.25)
3 Jereo koa:
I Jodita sy ny lohan' i Hôlôferna, nataon' i Cristofano Allori, 1613 (Royal Collection, London).
Nandresy ny Mediana i Nabokôdônôzôra (na Nebokadnetsara) mpanjakan' i Asiria ka nandefa ny jeneraly Hôlôferna tamin'ny faha-12 taonan' ny nanjakany mba hanafika haka ireo tany any andrefana. Nampitondrain' i Nabokôdônôzôra tafika lehibe i Hôlôferna ka nandresy hatranihatrany sady nandrava ireo toera-masina isan-tanàna no nanao izay tsy maintsy hanomezam-boninahitra an' i Nabokôdônôzôra sahala amin' ny andriamanitra. Tamin' ny farany dia tonga teo akaikin' ny vavahadin' i Israely ny tafika asiriana ka nanao fahirano ny tanàna atao hoe Betolia eo ampita, na dia efa nampitandrina azy ireo aza ny lehiben' ny Amônita atao hoe Akiora ny amin' ny hampandresen' Andriamanitra ny Israely raha tsy manota. Nefa rehefa lany vatsy ireo Betoliana dia kivy ka notenentenenin' i Jodita, taranak'i Simeôna, izay nanome tsiny azy amin' ny hakelin' ny finoan' izy ireo. Tapa-kevitra ny ho any amin' ny tobin' i Hôlôferna miaraka amin' ny mpanompo vavy iray i Jodita mba hamitaka azy amin' ny fanomezany azy vaovao tsy marina momba ny Jody. Rehefa nahita ny hatsaran-tarehin' i Jodita i Hôlôferna dia nanaiky hihaino azy sady nanasa azy amin' ny lanonam-pisakafoanana sy nitondra azy tany amin' ny trano lainy ka tao i Jodita no nanapaka ny lohany. Niverina tany Betolia izy nitondra ny lohan' i Hôlôferna ka gaga ny vahoaka ary tapa-kevitra ny hanafika sady nampadositra ny Asiriana izay tonga nalemy noho ny fahafatesan' ny mpitarika azy.
Fizaràn' ny bokyHanova
Azo zaraina roa ny Bokin' i Jodita ka ny fizaràna voalohany (Jod. 1 – 7) dia mitantara ny fanafihan' i Hôlôferna sy ny tsy fetezan' ny Israelita hilavo lefona; ary ny fizaràna faharoa (Jod. 8 – 16) dia mitatitra ny fanavotan' i Jodita ny fireneny.
Ny fanafihan' ny Asiriana sy ny nanaovana fahirano an' i BetoliaHanova
Ny fanafihan' ny Asiriana ireo firenena any andrefana (1.1–3.9)Hanova
I Nabokôdônôzôra sy i Arpaksada (1.1–1.12)
Ny fanafihan' ny Asiriana an' i Arpaksada (1.13–1.16)
Ny fanafihana ireo firenena any andrefana (2.1–3.9)
Ny horohoro nahazo an' i Israely (4.1- 7.32)Hanova
Ny nandrenesan' ny Israelita ny zava-mitranga (4.1–4.8)
Ny nifonan' ny Israelita amin' Andriamanitra (4.9–4.15)
Ny dinika tao amin' ny tobin' i Hôlôferna (5.1–5.24)
Ny fahatezeran' i Hôlôferna tamin' i Akiora (6.1–6.21)
Ny nanaovan' i Asiria fahirano an' i Betolia (7.1–7.32)
Ny nanavotan' i Jodita ny firenenyHanova
I Jodita (8.1 - 9.14)Hanova
Ny mombamomba an' i Jodita (8.1–8.9)
I Jodita sy ireo zokiolona (8.9–8.35)
Ny vavaka nataon' i Jodita (9.1–9.14)
I Jodita sy i Hôlôferna (10.1–13.20)Hanova
Nankany amin' i Hôlôferna i Jodita (10.1–10.23)
Ny resaka voalohany nifanaovan' i Jodita sy i Hôlôferna (11.1–12.9)
Nanatrika ny fanasana nataon' i Hôlôferna i Jodita (12.10–12.20)
Ny nanapahan' i Jodita ny lohan' i Hôlôferna (13.1–13.10)
Nentin' i Jodita tany Betolia ny lohan' i Hôlôferna (13.11–13.20)
Ny fandresen' ny Israelita ny Asiriana (14.1–16.25)Hanova
Nanafika ny tobin' ny Asiriana ny Jody (14.1–15.7)
Fiderana an' Andriamanitra (15.8–16.20)
Ny fahanteran' i Jodita sy ny nahafatesany (16.21–16.25)
Boky ara-tantara prôtôkanônika:
Bokin'i Josoa (na Jôsoe)
Boky voalohan'i Samoela
Boky voalohan'ny Mpanjaka
Boky faharoan'ny Mpanjaka
Boky voalohan'ny Tantara
Bokin'i Ezra (na Esdrasa)
Boky ara-tantara deoterôkanônika:
Bokin' i Tôbia
Boky voalohan' ny Makabeo
Boky faharoan' ny Makabeo
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Jodita&oldid=1041720"
Dernière modification le 18 Desambra 2021, à 17:55
Voaova farany tamin'ny 18 Desambra 2021 amin'ny 17:55 ity pejy ity.